ရောင်စုံုကမ္ဘာ နီပေါမှ ပိုခရာသို့ အလည်တစ်ခေါက်
လည်စရာတွေ ကတော့ များလွန်းလိုု့ တစ်လနေရင်တောင် လောက်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အခုုလောလောဆယ် သွားခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေနဲ့ ဘာတွေ လုုပ်လိုု့ရလဲ ပြောပြမယ်နော်။ ပိုုခရာဆိုုတာ တကယ့် စွန့်စားခရီးသွားတာကြိုက်သူ Adventurous Traveler တွေကြိုက်တဲ့မြို့ပါ။
လည်စရာတွေ ကတော့ များလွန်းလိုု့ တစ်လနေရင်တောင် လောက်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အခုုလောလောဆယ် သွားခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေနဲ့ ဘာတွေ လုုပ်လိုု့ရလဲ ပြောပြမယ်နော်။ ပိုုခရာဆိုုတာ တကယ့် စွန့်စားခရီးသွားတာကြိုက်သူ Adventurous Traveler တွေကြိုက်တဲ့မြို့ပါ။ တရားထိုုင်တာက စလိုု့ Buggy Jump အထိရှိတဲ့မြို့ပါ။ လုုပ်နိုုင်တဲ့ အရာတွေက တော့ -
၁) Paragliding – Paragliding ဆိုုတာကတော့ တောင်ပေါ်ကနေ လေထီးနဲ့ ပြေးဆင်းပြီး ဝေဟင်ထက် အမြင့်ပေ ၈၀၀၀ လောက်ကနေ စွန်ရဲတွေ ဝေဟင်မှာဝဲသလို လေဟုုန်စီးရင်း ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ရှုခင်းတွေကိုု ကြည့်နိုုင်တဲ့ Activity ပါ။ အသည်းယားဖိုု့ ကောင်းပေမဲ့ လေဟုုန်စီးရင်း ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးတွေကိုု ကြည့်ရတဲ့ ခံစားချက်က ဘာနဲ့မှ မလဲနိုုင်တာမိုု့ ပိုုခရာဟာ ကမ္ဘာပေါ်က Paragliding လုုပ်တဲ့ အကေင်းဆုံုးနေရာတွေထဲကတစ်ခုုပါဘဲ။ ဒီဟာလုုပ်မယ်ဆိုုရင်တော့ ဗီဒီယိုုနဲ့ ဓာတ်ပုံုပါပြီးသားကိုု ဒေါ်လာ ၉၀ ကျသင့်မှာပါ။ ဝေဟင်မှာ နာရီဝက်လောက်ဝဲပြီး Pilot နဲ့အတူ ပျံသန်းရမှာပါ။
အကောင်းဆုံုးထဲက တစ်ခုုဖြစ်တဲ့ အေးဂျန့်ကတော့ Sunrise Paragliding လိုု့ ဆိုုကြတယ်။ ကိုုယ်ဘာသာလုုပ်ချင်ရင်တော့ သင်တန်းတက်ရမှာပါ။ ၁၅ ရက် တက်ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ရက်ကိုု ဒေါ်လာ ၁၂၀ လောက်ပေးရပါတယ်။ ပိုုခရာဟာ ဒီကစားနည်းနဲ့ ကျော်ကြားပြီး Paragliding Championship တောင်ကျင်းပလေ့ရှိတာကြောင့် နိုုင်ငံတကာက ဝါသနာရှင်များ လာပြိုင်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
၂) Hiking / Trekking - Annapurna region တွေ ကိုု Trekking လုုပ်တဲ့အခါ Pokharaကနေ စရတာမိုု့ ဒီနေရာဟာ Trekking, Hiking, Mountaineering ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် သုုခဘုုံမိုု့ Adventure Paradise လိုု့တင်စားခေါ်ဆိုုကြတာပေါ့။
၃) Boating - လှေလှော်ဦးမလား လှေစီးဦးမလား နာမည်ကြီး Phewa Lake (Fewa) ကန်မှာလှော်လိုု့ ရသေးတယ်။ တစ်နာရီကိုု လှော်ခ ရူပီး ၄၀၀ လောက်ယူတယ်လိုု့ပြောတယ်။
၄) Whitewater Rafting / Kayaking / Canyoning – ကဲ ရေစီးသန်တဲ့ မြစ်ထဲက ကျောက်ဆောင်တွေကြားမှာ Rafting မလား၊ ဒါမှမဟုုတ် ကနူးလှေလေးနဲ့ပဲ လှော်ချင်သလား ကြိုက်တာအကုုန် ဒီမှာလုုပ်လိုု့ရသေးတယ်။ ပိုုခရာကိုုဝင်တာနဲ့ ကားလမ်းမကြီးကနေ သူများတွေ လုုပ်နေတာကြည့်ပြီး အားကျခဲ့ရလိုု့ နောက်တစ်ခါလုုပ်ဖိုု့ မှတ်ထားလိုုက်တယ်။
၅) Mountain Biking - နီပေါက Mountain Biking လိုု့ခေါ်တဲ့ တောင်တန်းတွေဆီက တောလမ်းကြမ်းတွေပေါ် စက်ဘီးစီးတာ အရမ်းကိုု ခေတ်စားပါတယ်။ စက်ဘီးစီးကျွမ်းကျင် သူတွေဆိုုရင်တော့ ဝင်ပြီးနွှဲလိုုက်ပါဦး။ မတတ်ရင်လည်း သင်တန်းတွေလည်းရှိတာမိုု့ တက်လိုု့ရပါတယ်။
၆) Ultralight aircraft flight - ကဲ Paragliding မလုုပ်ချင်လိုု့ လေယာဉ်သေးသေးလေးနဲ့ပဲ ပြန်ချင်တယ်ဆိုုရင်လည်း ရသေးတယ်နော်။ ဒါကလည်း ဖီလင်တစ်မျိုးလေးပေါ့။ ဒီဟာကိုု လုုပ်မယ်ဆိုုရင်တော့ စက်တင်ဘာကနေ ဂျွန်အထိပဲ ရပါတယ်တဲ့။
၇) Rock Climbing - ညီအစ်မ သုံုးဖော်ဆိုုတဲ့ အေဂျင်စီကတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် သီးသန့် Rock Climbing ခရီးစဉ်ကိုုစီစဉ်ပေးတယ်လိုု့သိရပြီး နာမည်ကြီးပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ သွားရင်လုုပ်ဖိုု့အတွက် တေးမှတ်ထားတဲ့အထဲ ဒီတစ်ခုုလည်းပါပါတယ်။
၈) Sunset/Sunrise Watching - ပိုုခရာရောက်ရင် လှပတဲ့ နေထွက်ချိန် နေဝင်ချိန်တွေ မလွတ်ရအောင် ကြည့်ခဲ့ဖိုု့ သတိပေးလိုုက်ပါတယ်နော်။ ဒီနေရာကိုုလာလည်တာ အရမ်းလှတဲ့ နေထွက်ချိန်ကိုု ရေခဲတောင်တွေနဲ့အတူ ကြည့်ရခြင်းပါပဲ။ ဘယ်နေရာကမှ မရနိုုင်ဘူးလိုု့ ကိုုယ်ကတော့ ထင်မိတယ်။
၉) Devi's Falls - သူ့ကိုုသွားကြည့်ရင်တော့ ဟင်ဒါလား ရေတံခွန်လိုု့ဖြစ်မိမှာ အမှန်ပါ။ ဒါဆိုုရင်တော့ ဟိုုဘက်လမ်းကူးပြီး ဂူထဲဝင်ကြည့်ဖိုု့ တိုုက်တွန်းပါရစေ။ ဂူအဆုံုးထိ လမ်းလျှောက်လိုုက်တော့မှ ဝိုုး ဟိုုဘက်က ရေတံခွန်နဲ့ ဒီဂူကြီးက ဆက်နေပါလားဆိုုတာ သိလိုုက်ရတယ်။ ဂူကြီးအပေါ်မှာတော့ ဈေးတန်းနဲ့ လူနေအိမ်တွေ ဆောက်ထားတာပေါ့။ အော် သူ့ကိုု ဘာလိုု့ Devi’s Fall လိုု့ခေါ်လဲဆိုုတော့ David လိုုခေါ်သူရဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက် ဒီရေတံခွန်ကိုုရှာဖွေတွေ့ပြီး ဆုံုးပါးသွားလိုု့ပါတဲ့။
၁၀) World Peace Pagoda (Shanti Stupa) - ၁၉၉၉ မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဒီစေတီကနေ နေဝင်နဲ့ နေထွက်ချိန်တွေ ကြည့်မယ်ဆိုုရင် Annapurna Mountains တွေကိုုမြင်ရမှာပါ။ ငါးမြီးတောင်ကိုုလည်း ဒီကနေ လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ ဒီကနေ နေထွက်၊ နေဝင်ချိန် ကြည့်မယ်ဆိုုရင် ပိုုခရာမြို့ကြီးအလှကိုု တောင်တန်းတွေနဲ့အတူ မြင်ရမှာပါ။ ဒီကိုုလာမယ်ဆိုုရင် ဆိုုင်ကယ်ငှားလာနိုုင်ပြီး ရူပီး ၁၀၀၀ ပေးရင် အသွားအပြန် ရပါတယ်တဲ့။ ဒီကိုု မရောက်ရောက်အောာင် သွားဖိုု့ တိုုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
၁၁) Sarangkot - ချီလီတို့နေထွက်ချိန် ကြည့်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့။ ဒီနေရာကိုု နေထွက်ချိန်ကြည့်ဖိုု့ တကူးတက လာကြတာများပါတယ်။ တောင်ကုုန်းပေါ်က ကော်ဖီဆိုုင်လေးတွေရဲ့ ခေါင်မိုုးပေါ်ကနေ တက်ကြည့်နိုုင်သလိုု View Point ကနေလည်း ကြည့်လိုု့ရပါတယ်။ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုု ရူပီး ၁၀၀ ပေးပြီး ကြည့်ရတာပေါ့နော်။ ဒီမှာလည်း နီပေါ Souvenir တွေကိုု ဝယ်ယူနိုုင်ပါသေးတယ်။ အကြိုက်ဆုံုးကတော့ ပဝါအကြီးကြီးတွေပါပဲ။
၁၂) National Mountain Museum - တောင်တက်တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်း တောင်တက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ တောင်တွေအကြောင်း သိချင်ရင် သွားကိုု သွားသင့်တဲ့နေရာပါ။ နောက်ထပ်လုုပ်လိုု့ရတဲ့ အရာတွေ ရှိသေးတယ်နော်။ ဘာတွေလဲဆိုုတော့ Zipline Adventure, Bungee Jumping, ဂေါက်ရိုုက်ခြင်း၊ ငါးမျှားခြင်း၊ Honey Hunting (ပျားရည်ရှာဖွေခြင်း)၊ ငှက်နဲ့ လိပ်ပြာလေးတွေ ကြည့်ခြင်း၊ တရားထိုုင်ခြင်း၊ အနှိပ်ခံခြင်း၊ ဟင်းချက်သင်တန်းတက်ခြင်း၊ တိဗက်လူမျိုး များဆီ သွားရောက်လေ့လာခြင်း တွေကိုုလည်း လုုပ်နိုုင်သေးတယ်။ အိုု… ပြောလိုု့တောင် ကုုန်ပါ့မလားပဲ။
၁၃) Night Out - ညဘက်ကောဘယ်သွားဦးမလဲ ဘားတွေများပေါလွန်းလိုု့။ Silk Road နဲ့ Busy Bee တိုု့ကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့ထဲ ပါပါတယ်။
မြို့တော် ခတ္တမန္တူကနေ တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်သွားရင် ဒီတောင်ပေါ်မြို့လေးကိုု ရောက်ပါတယ်။ ဒီနေရာလေးကတော့ လူငယ်တွေအတွက် ပျော်စရာများတဲ့ နေရာလေးပါ။ ချီလီအရမ်း သဘောကျတာကတော့ ဒီက ဟိုုတယ်တွေပါပဲ။ ဈေးတွေက ၁၀၀ တန်ဆိုု5star လောက်ရှိပါတယ်။ ဒီကိုု လာကြတဲ့လူတွေက Trekking & Hiking အဓိက လာလုုပ်ကြတာပါတဲ့။
Lumbini - မြတ်စွာဘုုရား ဖွားမြင်ရာ နေရာမိုု့ ဗုုဒ္ဓဘာသာတွေ တကူးတကလာရောက်ဖူးရတဲ့နေရာပါ။ ဒီမှာ ဘုုရားရှင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာကိုု အသိအမှတ်ပြု ကျောက်ပြားလုပ်ထားတဲ့ မယ်တော်မာယာဒေဝီ ကျောင်းတော်ကြီးကိုု သွားရောက်ဖူးမြော်နိုုင်ပါတယ်။ အထဲမှာတော့ ဓာတ်ပုံုပေးမရိုု်က်ပါဘူးရှင်။
နီပေါမှာ ဈေးပေါတဲ့ နေရာတွေကနေ ဈေးကြီးတဲ့ Resort တွေအထိ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိုုလာရင် Resort တွေမှာ နေစေချင်တယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေတယ် ဆိုုရင်တော့ hostel တွေမှာလည်း နေနိုုင်ပါတယ်။ Resort တွေထဲမှာလည်း ၁၀၀ လောက်နဲ့ ကောင်းကောင်း ရတာတွေ့ရလိုု့ မျက်လုံုးတောင် ပြူးရတယ်။ သွားခဲ့တဲ့မြို့တွေမှာ နေခဲ့တဲ့ နေရာလေးတွေကိုု အသားပေးရေးထားပါတယ်။
Kathmandu ခတ္တမန္ဒူ - Maya Manor Boutique Hotel
Lumbini (လုုမ္ဗနီ) - ဒီမှာတည်းခဲ့တာကတော့ Lumbini Hokke Hotel ပါ။ အခန်းက ရိုုးရိုုး ပုံုစံနဲ့ ဂျပန်စတိုင်အခန်းရယ်ဆိုုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ လုုမ္ဗနီမှာ ဈေးသက်သာချင်ရင်တော့ မြန်မာဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာတည်းလိုု့ရပြီး ရူပီး ၅၀၀ မြန်မာငွေ ၆၅၀၀ ကျပ် လှူရင် အစားအသောက်ပါ ကျွေးတယ်လိုု့ သိရပါတယ်။ ကျွေးတာကတော့ သက်သက်လွတ်ထမင်းဟင်းပါတဲ့။
Hotel Country Villa Resort ဒေါ်လာ $80-100 ကြားရှိပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံုးကတော့ မနက်စာစားတဲ့နေရာက မြင်ရတဲ့ဗျူးနဲ့ အခန်းက မြင်ရတဲ့ ဗျူးပါ။ နေထွက်ချိန်၊ နေဝင်ချိန် ကြည့်ရတာ အရမ်းလှတဲ့ဟိုုတယ်လိုု့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ကိုုယ်တွေဆိုု ရှုခင်းသဘောကျလိုု့ ရောက်တာနဲ့ အခန်းထဲမဝင်ဘဲ ဓာတ်ပုံုတွေ ရိုုက်ရအောင် ဆွဲဆောင်နိုုင်လွန်းတယ်။
Himalaya Club – ဒီဟိုုတယ်မှာ ပြင်ဆင်ထားတာလေးက ဘာလီက ဟိုုတယ်လေးနဲ့တူတယ်။ ရေကူးကန်ကြီးလည်းရှိတယ်။ သူပြင်ဆင်ထားတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုုဆိုုရင် ပူတာအိုု Lodge အတိုုင်းပဲ ဈေးကတော့ $130 တဲ့။ တန်မှတန်နော်။
Home Stay - နာဂါကော့မှာ လမ်းတစ်လျှောက် Home Stay တွေအများကြီးတွေ့ရတော့ ဘတ်ဂျတ် သမားတွေအတွက် အတော် အဆင်ပြေလှတယ်။
Pohkara - တောင်တန်းကြီးကိုု မနက်ထထခြင်းမြင်ချင်တယ်ဆိုုရင်တော့ တောင်တန်းတွေကိုု မြင်ရတဲ့ Himalaya Front မှာနေလိုု့ရပါတယ်။ တစ်ရက်ကိုုမှ ၁၀၀ ဒေါ်လာ ဝန်းကျင်ဆိုုတော့ ပေးပျော်ပါတယ်။ ဒီလိုု ရေခဲတောင်တန်းကြီးနဲ့ အတူ နိုုးထရတဲ့မနက်ကိုု ပိုုင်ဆိုုင်ခွင့်ရတာနဲ့တင် တန်နေပါပြီနော်။ ရေကန်ကြီးကိုု မြင်ချင်ရင်တော့ Water Front Hotel ကိုုတည်းပါ။
Pohkara - Raniban Resort – ဒီနေရာလေးကတော့ ကန်နဲ့ ပိုုခရာမြို့အလှတင်မက ရေခဲတောင်တန်းတွေရဲ့ အလှကိုု မြင်နိုုင်တဲ့နေရာလေးမိုု့ တည်းဖိုု့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက လှေကားထစ်ပေါင်း ၅၂၃ ထစ်ကိုုတက်ရတာမိုု့ လူငယ်မှပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ World Peace Pagoda (Shanti Stupa ကိုုလည်း ဒီကနေ လှမ်းမြင်ရမှာပါ။
Pohkara- Fishtail Resort - သူကတော့ နာမည်အတိုုင်း Fishtail ရေခဲတောင်ရဲ့အလှကိုု မြင်ရမှာပါ။ ငါးအမြီးနဲ့ တူလိုု့ ဒီတောင်ကိုု ငါးမြီးတောင်လိုု့ ခေါ်ကြပါတယ်။ နီပေါသူ နီပေါသားများအတွက် ငါးဆိုုတာ မြင့်မြတ်တဲ့အထဲ ပါဝင်တာမိုု့ ဒီရေခဲတောင်ဟာလည်း Holy Mountain ထဲမှာပါတာမိုု့ တောင်တက်ခြင်းကိုု ပိတ်ပင်ထားတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Fishtail Resort မှာနေမယ်ဆိုုရင်တော့ တစ်ရက်ကိုု ဒေါ်လာ၂၀၀ ကျော် လောက်ကျမှာပါ။
Pohkara - Butterfly Lodge - ဘတ်ဂျက်သမားတွေအတွက် ဟိုုတယ်တွေ Guest House တွေလည်း အတော်များများ ရှိတဲ့အထဲမှာ ဒီတစ်ခုုကတော့ ရတဲ့အမြတ်တွေကိုု butterfly foundation charity ဆီ လှူဒါန်းတာမိုု့ သဘောကျစရာကောင်းတဲ့ နေရာလေးပါ။ ကျန်တာတွေ သိချင်ရင် Booking.com, Air BNB တ့ိုုမှာ ရှာနိုုင်ပါတယ်။
နီပေါမှာ ဘာစားကြမလဲ ?
သေချာတာကတော့ ဒီရောက်ရင် နီပေါအစားအစာတွေ မြည်းစမ်းစေချင်တာပဲ။ နီပေါစာမကြိုက်ပေမဲ့လည်း ကိုုယ်ကတော့ ဟိုုမြည်းဒီမြည်းလုုပ်ခဲ့တာပေါ့။ ဒီမှာရတဲ့ စမူဆာ၊ အာလူးပူရီ၊ ပါပရာ၊ မိုုမိုု ဒါတွေကိုုမှ မစားခဲ့ဖူးဆိုုရင် သင့်ခရီးစဉ်က ပြည့်စုံုမှာမဟုုတ်ပါဘူး။
နီပေါရဲ့ ပွဲတော်များ - Diwali ကျင်းပတဲ့ အောက်တိုုဘာ (သိုု့) နိုုဝင်ဘာနဲ့ Full Moon Trance Parties ကျင်းပတဲ့အချိန်တွေကိုု စုံုစမ်းပြီးသွားနိုုင်ရင်တော့ ပိုုကောင်းပါတယ်တဲ့။
ဘာလက်ဆောင် ဝယ်မလဲ ?
နီပေါရောက်ရင် ဂေါ်ရခါးဓား၊ နီပေါကလုုပ်တဲ့ အိတ်လေးတွေ၊ ဆွဲကြိုး၊ နားကပ်လှလှလေးတွေ၊ ဆာရီတွေ၊ ခြုံထည် ပဝါတွေက အရမ်းကိုု ဝယ်လိုု့ကောင်းတာမိုု့ အပြန်ခရီးမှာဝယ်ဖိုု့မမေ့ပါနဲ့နော်။
ကဲဒီလောက်ဆိုု ကိုုယ့်ခရီးစဉ်လေးက အားလုံုးပါပြီလိုု့ထင်ပါတယ်ကွယ်။ နီပေါဟာ ကိုုယ်ထပ်သွားချင်တဲ့ နိုုင်ငံထဲမှာပါလိုု့ ကျန်တဲ့သူတွေပါ အပျော်တွေ ကူးစက်အောင် ရေးပေးလိုုက်ပါတယ်။
(ဤဆောင်းပါးသည် Travelling Review အကောင်းဆုံးပေးနိုင်သည့် My Khayee ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှ ဖြစ်သည်။)